किड्स ट्राईयाथलनमा तेन्जिनलाई स्वर्ण « KhelkudNews.com
किड्स ट्राईयाथलनमा तेन्जिनलाई स्वर्ण
Published On : 29 September, 2018 9:59 pm
तेन्जिन एन. रायन गुरुङ्ग किड्स ट्राईयाथलन च्याम्पियनसिपमा सिनियर ब्वाईज तर्फ स्वर्ण हात पार्न सफल भएका छन् ।र्निचर ल्याण्ड प्रा. लि.को प्रायोजनमा भएको च्याम्पियनसिपमा गुरुङ्गले २५ मिटर पौडी, ८०० मिटर साईक्लिङ्ग र ५०० मिटर दौड ५ मिनट २६ सेकेण्डमा पुरा गर्दै स्वर्ण हात पार्न सफल भएका हुन् ।
नेपाल ट्राईयाथलन संघको तत्वावधान तथा ललितपुर जिल्ला ट्राईयाथलन संघको आयोजनामा भएको च्याम्पियनसिपको दोश्रो स्थानमा युभन लाल श्रेष्ठ रहे । उनले उक्त दूरी ६ मिनट ०३ सेकेन्डमा पार गरे । तेश्रो स्थानमा रहेका शिद्धार्थ तुलाधरले ६ मिनट ०५ सेकेन्डका साथ दूरी पुरा गरे ।
ललितपुर बज्रबाराहीमा भएको च्याम्पियनसिपमा सिनियर गल्र्स तर्फ राभ्या श्रेष्ठले ६ मिनट ४७ सेकेन्डका साथ स्वर्ण, वियुषा राईले ७ मिनट ०२ सेकेन्डका साथ रजत र तमन्ना अग्रवालले ८ मिनट ३२ सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्दै कास्य पाईन् ।
जुनियर तर्फ ब्वाईजमा आरोण भन्डारी पहिलो भए । उनले ४ मिनट ५७ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे । नोवल महर्जनले ५ मिनट ०६ सेकेन्डका साथ दोश्रो र ५ मिनट ०७ सेकेन्डका साथ अभान लाल श्रेष्ठ तेश्रो भए ।
गल्र्स तर्फ श्रृती श्रेष्ठले ६ मिनट ०७ सेकेन्डका साथ स्वर्ण पाईन् । दोश्रो स्थानमा सुभानी तुलाधर रहिन् । उनले ६ मिनट २४ सेकेन्डमा दूरी पुरा गरिन् ।
बिजयी खेलाडीहरुलाई प्रमुख अतिथी नेपाल ट्राईयाथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्र राज श्रेष्ठ, प्रायोजक फर्निचर ल्याडण्ड प्रा. लि.का अध्यक्ष मदन लाल जोशी, इमेरल ई.बो.स्कुलका प्रिन्सिपल जितबहादुर क्षेत्रीले खेलाडीहरुलाई मेडल तथा प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।
च्याम्पियनसिपमा ५० खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।